Ukuphupha malunga nemboleko Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Izizathu zokuthatha imali mboleko zinokwahluka kakhulu, kokubini ngokwenyani nakwinqanaba lamaphupha. Omnye unokufuna ukuthenga ikhaya elitsha ngelixa elinye lisenokufuna imali yomtshato. Ukuthenga umatshini wokuhlamba kunokufuna imali mboleko yezavenge.
Nabani na okwangoku osokolayo ngalo mbandela ngekhe amangaliswe ukuba uphupha ngemalimboleko nayo. Emva kwakho konke, iziganeko zemihla yangoku zihlala zibonakala emaphupheni. Kodwa kuthetha ntoni xa esi sihloko singaqhelekanga kuwe? Nguwuphi umyalezo onokufihlwa ngasemva kwesimboli yamaphupha «mboleko»?
1 Uphawu lwephupha «imboleko» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «imboleko» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «imboleko» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «imboleko» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwinqanaba eliqhelekileyo lohlalutyo lwamaphupha, isimboli yemali mboleko isetyenziswa ikakhulu njenge isimanga esibi iqwalaselwe. Ngenxa yokuba umphuphi uzimisele ukwenza ukuzibophelela kwezemali kunye nomhlobo, onokukhokelela esiphelweni kobu buhlobo ngokukhawuleza. Ke ngoko, kuya kufuneka ujonge ngononophelo ukuba ungathanda ukuthatha umngcipheko onjalo ekuvukeni ubomi.
Nabani na oboleka imali okanye ocela imali mboleko ephupheni kufuneka azilungiselele iintlungu kunye nexhala. naye ukulahleka kweshishini kwaye iingxabano zosapho zinokuvela kulo mfanekiso wephupha. Ukuba, ngokuchaseneyo, umphuphi uhlawula imali mboleko yebhanki xa elele, ikamva lakhe liya kukhula ngokuqinisekileyo.
Ukugatywa kwenkxaso-mali yibhanki njengephupha kunokuhlala kukhomba kuloyiko lokwenyani lwemeko efanayo el mundo vuka. Ukuba iphupha elo linika imali mboleko kwabanye abantu ephupheni lakho ngelixa uleleyo, uya kuba uvukile ebomini. Iintshaba yenza.
Iphupha lobambiso, elinikezwe ikhontrakthi kwindlu okanye kwigumbi, umzekelo, liqondwa njengophawu lokujonga rhoqo umcimbi othile, othi, nangona kunjalo, ufuna ingqalelo rhoqo. Into ebolekiweyo okanye ebolekwe ephupheni nayo inokuchaphazela ilahleko Abahlobo kwihlabathi lokwenyani.
Uphawu lwephupha «imboleko» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lwephupha «mboleko», ukuba umphuphi kufuneka aboleke imali, inokusetyenziswa kumntu okwinqanaba eliphantsi lemfundo. Ukuzithemba Iingoma. Umntu ekuthethwa ngaye unoluvo lokuba ubuchule bakhe abonelanga kwisizathu esithile kwihlabathi elivukayo.
Ukuba uhlala kwikhredithi ephupheni lakho, kufuneka uhlele iphupha lakho zixhobo jonga ebomini bokuvuka. Kuba kufuneka aboniswe ukuba ulindele okungaphezulu kunoko anokukwenza ngoovimba bakhe bamandla.
Ukuba umphuphi ubuza umphathi wakhe ngelixa elele kwangaphambili kumvuzo wakhe okanye kwangaphambili, unokufumana ukuhanjiswa kuye iimfuno zesondo.
Ukuba umphuphi akanamali ngelixa uleleyo kwaye ke uhlawula ngekhadi letyala, kufuneka aqonde ukungqubana okuphazamisa ukulingana kwengqondo.
Ityala njengophawu lwephupha kwiimeko ezininzi lubonisa a Cwepaukuba umntu oleleyo uziqhubele ngokwakhe. Nangona kunjalo, oku akunakuba kuphela kumatyala ezinto eziphathekayo, kodwa kwinqanaba lokomoya likwajongiwe. Oku kuziphatha gwenxa kufuneka kujongwane nako ukuze ukuvumelana ngokweemvakalelo kufezekiswe kwakhona.
Ukuba isizathu semali mboleko siyabonakala ephupheni, oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo ngokwenkcazo yengqondo yephupha ukuze liqhubeke nohlalutyo. Unokwazi ukuboleka ngelixa ulele ukutshata okanye ukuthenga imoto entsha.
Uphawu lwephupha «imboleko» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya kujonge isimboli yephupha lomphuphi xa uthatha imali mboleko. inkxaso noncedo.